I support for ikhibhodi BlackBerry 8800 / 8820/8830 — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry 8800 / 8820/8830 ‎ → ‎
I support for ikhibhodi BlackBerry 8800 / 8820/8830
Imininingwane kwekhibhodi, yibona abasengozini enkulu contact umswakama. It is a ifilimu enikezwe fixed banana metal izinkinobho, kubuyela endaweni yalo emva ngamunye ukuphokophela. BlackBerry 8820 — smartphone ibhizinisi lakho. Nothing engadingekile. Sihlanganisa konke lokho kuyadingeka ukuqinisekisa zokuxhumana abasebenzi bakho, amakhasimende kanye nabalingani. Muhle on
I support for ikhibhodi BlackBerry 8800 / 8820/8830 — lwangempela esikhululekile okuyingxenye: substrate efanayo ogibele ebhodini unina smartphone uma ababebuthene. It is a ifilimu enikezwe fixed banana metal izinkinobho, kubuyela endaweni yalo emva ngamunye ukuphokophela.
On BlackBerry 88xx uchungechunge ikhibhodi kuhlanganisa izinkinobho nokwamukela bese ukhansela ucingo, imenyu, futhi "emuva", kunjalo futhi ekhona substrate.
Uma unezinkinga nge kwekhibhodi 8800/8820/8830 Ngokuvamile indlela yokuphuma iwukuba buyisela substrate yayo, eqinisweni siphetha contact uma uqhafaza inkinobho ngamunye. Uma lo mshini uthola ezimanzi, ezinye izinkinobho musa ukusebenza, kabili, noma awasebenzi njengoba kufanele — udinga ukuba esikhundleni substrate ikhibhodi. On ukukhanda izingxenye enkonzweni yethu sesevisi: Ukukhipha ukusekelwa ikhibhodi (ikhibhodi chip).
Product type: Spare part → Substrate or keypad PCB → Substrate only
I support for ikhibhodi BlackBerry 8800 / 8820/8830, Ngaphandle umbala 8800KEYPUI ●
Product code: 8800KEYPUI